NKWỌ (14-03-16) – hoo!haa!!
NKWỌ. Igbo ndi ọma, unu abọọla chi. Taa bụ Nkwọ; Nkwọ Nnewi, Nkwọ Mbanabọ Awgu, Otu Nkwọ Ọnịcha, wdg.
Onye ga-aga ahịa taa? Uru dịkwa ya, onye zụkarịa o nweta ihe nrite gbara agba
Previous Post: AFỌ(Stomach)/AFỌ ( Year )
Next Post: EKE (15-06-18)
Taa, agbara m uzo gaa Nkwo Okija tupu ndi mgbere azuchaa ihe dum. Okija di na okpuru ochichi goomenti Ihiala na Anambara Steeti. Okija di n’etiti Ozubulu na Ihiala ma esi Onicha gawa Owere n’ Imo Steeti. Nkwo Okija dikwa na akuku ulo uka ukwu ndi uka Katoliki aha ya bu Senti Meri.
Otutu ihe ka a na-ere na Nkwo Okija dika akwu, akpu, ogbono, okporo akpu, egwusi, ogbe ugu, oka, ogiri, agbara ati, anyu na ukwa. Ihe ndi a bu na nkata na nkata.
Ihe ozo bu mkpuru osisi di iche iche dika ugiri, oroma, mangoro, ube Igbo na nke bekee, popo na udara. A na-erekwa ha na nkata.
Ozo kwa bu akwukwo nri di iche iche dika utazi, ugu, nchu anwu, uziza na onugbo. Ndi a bu na ukwu na ukwu ka a na-ere ha.
Ihe ndi ozo bu mmanu anu, mmanu nri, utaba, kaikai, aziza, okeokpa, aki na ukwa na ihe ndi ozo.
E nwere uzo ndi ato na-abia azuru ihe na aka ndi ime obodo. Ndi mbu bu ndi na azuru gaa na Obodo mepere emepe gaa ree ha. Ndi abuo bu ndi na azuru ma ree ha na Nkwo Okija. Ndi nke a to bu ndi di ka mu na-abia azuru ihe ha choro n’ ulo ha.
Ndi ozo na-ere ihe na ahia a bu ndi na- aga Obodo mepere emepe ga zuta ihe anaghi eme n’ime Obodo dika ude na ncha bekee, mmiri ara ehi, ose na akpukpu ukwu, gaa resi ndi no n’ime Obodo.
Enwekwara odu ahia ndi Omenala ebe a na-ere ego ayoro, nzu, edo, unyi, akwa ocha, joji, akwa Mme mmee, akwa okuko Igbo, okuko na ewu Igbo w.d.g
A gara m gaa zuru ihe ndi m gaa eji gwoo isi ewu na ugba maka noo ihe eji agwo isi ewu ka ejikwa agwo ugba. Ihe ndi m nzutara bu isi ewu, ukpaka, mmanu nri, ehuru, akanwu, ose bekee na utazi. Azutakwara m okporoko a ga-eji emerube ugba ahu.
A huru m otutu umunna na ahia taa. Okija enyi!!!